Mastful Instagram Tips Ho an'ny mpanjifa ny marika tianao - Semalt Perspektive
Misy ny eritreritra momba Instagram fa ny mpandraharaha sasany dia tokony hiala. Iza no nilaza fa ny sehatry ny haino aman-jery sosialy dia ny 'tanora tanora' ihany no mamoaka sary sy lahatsary haingo? Fotoana nahitanao ny Instagram tamin'ny hazavana vaovao: miaraka amin'ny fiakarana tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny fivarotana haino aman-jery sosialy, tsy misy tokony atao amin'ny zom-pirenena.
Amin'ny teny hafa, ny tetikady mety amin'ny Instagram dia afaka manatsara ny marikao - hem?ire elbisesi.
Tsy mandainga ny isa. Instagram dia mivoatra tsikelikely amin'ny maha-mpanjaka ny media sosialy. Araka ny voalazan'i Scott Galloway (profesora raharaham-barotra, NYU stern), Instagram dia manana tarehimarika 50x bebe kokoa mihoatra ny Facebook ary 20x ny Twitter. Amin'ity taona ity (2017), 51.8% amin'ireo tia ny media sosialy no ao Instagram izay vao voalohany no nandalo ny marika 50%. Aza avela hijanona, azafady amin'ity fironana vaovao ity.
Hanombohana, ampiasao ireo torohevitra 6 voatondro ho an'i Frank Abagnale, ny Customer Success Manager Semalt Digital Services.
1. Manatsara ny bio anao
Manomboha amin'ny fametrahana bio tsara tarehy miaraka amin'ny rohy Bitly mankany amin'ny tranonkalanao ofisialy. Mariho fa ao amin'ny bio ihany no azonao ampidirana ity rohy ity. Ity rohy "Like2Buy" ity dia hitondra mivantana ireo mpanjifa ho amin'ny pejy mitahiry amin'ny tsipiriany rehetra - sary, vidiny, karaoty, sns.
2. Manombana ny votoatin'ny 'sakafo'
Aza mividy mafy. Tsy manome vokatra tsara amin'ny mpihaino anao izany. Ny votoatinao dia tokony ho fifangaroan'ny hafatra fandraisana anjara, fanazavana kely momba ny vokatra sy tolotra / promos. Ny mpividy dia mitatitra ny fiantraikany mahery vaika avy amin'ny media sosialy rehefa mividy zavatra..Amin'ny toe-javatra rehetra dia ny haino aman-jery no mampiavaka azy ireo. Faharoa manaraka dia tonga ny media sosialy marika (eto ianao no miditra) amin'ny 38%. Ankoatra ny 35% voakasik'izany dia nisy fiantraikany avy amin'ireo mpivarotra tao Instagram. Manaraka ny ohatra nasehon'i Nike sy Adidas - tamin'ny taona 2014, nakarin'i Nike 60% ny votoatiny mifototra amin'ny toetran'ny olona, ​​raha 32% ny an'i Adidas. Mino izany na tsia, nahazo fifandraisana miisa 8x mihoatra an'i Adidas i Nike.
3. Manisa ny diaspora
Mamoròna fomba fijery manokana momba ny marikao. Ampiasao sary mahafinaritra sy sary tsy manam-paharoa ary koa horonan-tsary mba hitazonana ny mpihaino anao. Ampiasao ny tenifototra izay miely haingana kokoa. Mety ho asa sarotra izany, fa tokony hametraka lalana iray.
4. Mitandrema ny fandraisana anjaran'ny mpanatrika
Misy fitaovana sasantsasany azonao ampiasaina mba hijerena ireo tarehimarika. Crowdfire, SimplyMeasured, Iconosquare sy fitaovana hafa analytiana dia hanampy anao hamantatra ny lanjan'ny lahatsoratra tsirairay sy ny fifandraisana aminy. Ataovy fotsiny izay ahafahanao mikarokaroka tsara ny teny fanalahidy mba hahazoana fifandraisana bebe kokoa. Tsy mampaninona anao ny mahita marika hafa mampiasa ny tenifototra mitovy amin'izany.
5. Kapohy ny ampahany arivo taona
Ny taonarivo maro dia tia Instagram. Ny marikao dia tokony hifandray amin'ny tapany arivo taona izay ahafahany mamelatra ny teny amin'ny alalan'ny sary na horonan-tsarimihetsika. Ny tantara ao amin'ny Instagram dia tena malaza ka maninona no tsy mieritreritra ny hamporisika ny mpihaino na hanome azy tolotra tolotra iray.
6. Ahoana ny momba ny ambasadera marika?
Raha manana ny teti-bola sy ny sitrapao ianao mba hitadiavana ny mpitarika iray dia mandehana dieny izao ary ataovy izany. Mandritra izany dia miantoka fa ny mombamomba azy dia madio ary manan-danja lehibe izy. Aza avela hiondrana any aoriana. Vao haingana ny fikarohana dia nandinika lahatsoratra iray tapitrisa avy amin'ny marika 800 samihafa. Izany no hitan'izy ireo - 92% no nanangana Instagram izay nametrahany ny salan'isa 15 posts isan-kerinandro. Miaraha amin'ny fiaramanidina.